COPA AMERICA: Urugay oo guul darro kala kulantay xulka Mexico – Gool FM
COPA AMERICA: Urugay oo guul darro kala kulantay xulka Mexico
(America) 06 Juunyo 2016. Xulka Uruguay ayaa guul darro ku bilowday Copa America kaddib markii ay guul darro 3-1 kala kulmeen xulka Mexico.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa lagu kala nastay 1-0 oo uu ku hogaaminayo xulka Mexico kaddib markii uu kama gool iska dhaliyay Alvaro Pereira daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta, laakiin waxa kaarka cas ka qaatay xulka Uruguay Matias Vecino dhammaadka qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Jose Guardado ayaa isna kaarka cas ka qaatay xulka Mexico daqiiqadii 73-aad waxaana midaa ka faa’iideystay xulka Uruguay oo daqiiqad kaddib la yimid goolka bar-baraha waxaana u dhaliyay daafaca birta ah ee kooxda Atletico Madrid Diego Godin.
Laakiin dhammaadka ciyaarta daqiiqadihii 85-aad iyo 90-aad ayuu xulka Mexico helay labo gool oo deg deg ah waxaana u kala dhaliyay Rafael Marquez iyo Hector Herrera.
Dhaliyaha horyaalka La Liga ee Luis Suarez ayaa ciyaartan dhaawac uga maqnaa xulkiisa Uruguay.
England oo ku guuleysatay Soccer Aid 2016 kaddib markii ay afka ciida u dartay koox mataleysay caalamka intiisa kale, Yaa ka mid ahaa?+SAWIRRO